AQRISO Hadalo Macaan Oo Aad Ku Odhan Kartid Gabadha Hadii Aad Doonaysid In Ay Ku jeclaato - Allbanaadir
Home Warka Maanta AQRISO Hadalo Macaan Oo Aad Ku Odhan Kartid Gabadha Hadii Aad Doonaysid...
AQRISO Hadalo Macaan Oo Aad Ku Odhan Kartid Gabadha Hadii Aad Doonaysid In Ay Ku jeclaato
Ragga inta badan waxa ku adkaata in ay muujiyaan dareenkooda taas oo inta badan dhibaato ku keenta iyaga iyo lamaanohooda kale kuwaas oo doonaya in ay Romantic noqdaan.
Qaar ka mid ah raggaas waxay ka baqaan inay u muuqdaan kuwo Nacaso ah hadii ay muujiyaan dareenkooda taas oo keenta in ay ka cabsadaan soo bandhigista dareenkooda.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa arimo aad abadha ku odhan kartid taas oo wajigeeda ku abuuraysa farxad:
Nolosheyda macno ayaad siisaa:
Marka aad gabadhaada u sheegto inay noloshaada macno siinayso, macnaheedu maaha inaadan ujeeddo lahayn shakhsi ahaan. Markaad sidaa tiraahdo, waxaad u sheegaysaa inay noloshaada ku hodmisay inay ka mid noqoto.
Waxaad tahay Gabadhii aan raadinayey:
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu macaan ee loo sheego gabadha ayaa ah in ay tahay waxa ay raadineyso oo dhan. Sidan, waxaad u sheegtaa inay tahay wax kasta oo ay rabto oo ay u baahan tahay.
Waxaad tahay waxa ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca markaan soo tooso
Markaad soo kacdo, sida caadiga ah waad jahawareersan tahay oo weli waad huruddaa, markaa qofna kuma fikiri doonto mar haddaad indhaha kala qaado. Haddii aad gabadhaada u sheegto inay tahay waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca markaad kacdo, way garanaysaa macnaha ay adiga kula tahay.
Waxaad tahay fikirkayga ugu dambeeya ka hor inta aanan seexan:
Waxyaabaha ugu macaan ee gabadha loo sheego waxaa ka mid ah in aad iyada ka fikirto oo ay maskaxdaada ku soo dhacdo marka aad seexanayso waliba ay tahay qofka ugu dambeeya ee aad ka fikirto ka hor inta aanan seexan waana wax ay gabadh walba jeceshahay.
Waxaan kaa fikiraa markaan mashquulsanahay:
Way fududahay in qof laga fikiro marka aanad wax hawl ah hayn, mararka qaar waxa aan dareenaa xaalad jacayl marka aan qof u xiisno laakiin marka uu qofku kaa fikiro marka uu mashquulsanahay waxa ay gabadha ku keenaysaa in ay amaan ku dareento qalbigaaga.